ကျွန်ုပ်တို့သည် COLIN THE CATERPILLAR ကိုယူကေအဓိကစူပါမားကတ်များထံမှ ၀ ယ်ယူလိုက်သည်။ - သတင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Colin the Caterpillar ကိုယူကေအဓိကစူပါမားကတ်များထံမှ ၀ ယ်ယူလိုက်သည်။
ဒီပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ - မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကဒီစနေနေ့မှာသူသွားနေတဲ့တကယ့်ကိုအေးမြတဲ့အိမ်ကြီးပါတီအကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ မင်းလမ်းလျှောက်နေတယ်၊ ​​ဘီယာခြောက်ခုနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အရွယ်ရောက်သူလူကြီး ၂၀ ဟာ Caterpillar ကိတ်မုန့်ငါးလုံးနားမှာမတ်တပ်ရပ်နေကြတယ်။ ခူကောင်နီကော်နီသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ကိုပင်မသိသောအမျိုးသမီးသင်္ကေတအသစ်ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များအနေဖြင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုခံရခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါအကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောဆိုနိုင်ခြင်းအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူသကဲ့သို့ပင် Colin the Caterpillar သည်ကျွန်ုပ်တို့မျိုးဆက်၏မာနဖြစ်သည်။ သူသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ MGP ဖြစ်သည့် OG ဖြစ်ပြီးသူသည်သက်မဲ့အစားအစာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါကဤ Brexit ရှုပ်ထွေးမှုမှကျွန်ုပ်တို့ကိုပင်ထွက်ကောင်းထွက်စေနိုင်သည်။
Colin the Caterpillar ကိုမူလက Marks & Spencer တွင်သာရောင်းခဲ့သော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအခြားစူပါမားကတ်ကွင်းဆက်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မုန့်ဖိုစင်များအတွက်အကောင်းဆုံး Colin dupe လုပ်ရန်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသော Colin အဆိုပါ Caterpillar ကိတ်မုန့်, ​​ကြိုးစားခဲ့သည် Connie အဆိုပါ Caterpillar - M&S သည် Colin ၏အရသာရှိသောရည်းစားအဖြစ်ဖော်ပြသော UK နိုင်ငံရှိအဓိကစူပါမားကက်ငါးခုမှဖြစ်သည်။
အဖြစ်ကောင်းစွာ Connie ကျနော်တို့သို့မှီဝဲတယ် တေးရေး Sainsbury's မှ, မောရစ် Morrisons မှ ကောက်သော Tesco နှင့် Co-op မှ Charlie တို့ဖြစ်သည်။
Colin ၏အခြားတစ်ဝက်ဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Caterpillar Connie အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိကြပါ။ သူမ၏အရသာရှိသောချောကလက်အခွံနှင့်စိုစွတ်သောရေမြှုပ်သည်အလင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောဟန်ချက်မျှသာဖြစ်သည့်အတွက် Connie ၏ဖြန်းဆေးသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကိတ်မုန့်တစ်ပန်းလျှင်ပန်းရောင် Smarties သုံးမျိုးဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသည်။
Connie ကိုများများကြည့်လေလေသူမကအမျိုးသမီးရေးရာပုံရိပ်ဟုထင်လေလေဖြစ်သည်။ သူမမျက်လုံးပြူးမကြည့်တဲ့မျက်လုံးများနှင့်သူမခြေကျင်းဖိနပ်ခြောက်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့်သူမဘာကိုကိုယ်စားပြုနေတယ်ဆိုတာကိုစာသားအရမဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲခဏကြာပြီးတဲ့နောက် Connie ဟာကျိုင်းကောင်ထက်ယုန်နဲ့အနည်းငယ်ဆင်တူကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ Soz, Connie ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရမှတ်: 4.5 / 5
Caterpillar Wiggles (Sainsbury's)
သူ၏ခူကောင်များနှင့်မတူဘဲ Wiggles တွင်သူ့ကိုယ်ပိုင်အရာရှိခဲ့သည်။ Wiggles သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ရှိပြီးသူလိုချင်သည့်အချိန်အတိအကျကိုသူသိသည်မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည့် alliteration အတွက်အလယ်တန်းလက်ချောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ကျိုင်းကောင်ကိတ်မုန့်ပုံသဏ္shapeာန်ဖြစ်သော်လည်း Wiggles တွင်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေသော်လည်း၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ In ။ ဒါ လုံးချင်းအိမ် ငါတို့ Do. မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ခန္ဓာ အရှက်ကွဲခြင်း။
အရသာအရပြောရရင် Wiggles ကစိုစွတ်နေပေမယ့်သူ့ရေမြှုပ်က Connie လောက်မချိုပါဘူး။ သူ၏အလှဆင်မှုများသည်နည်းနည်းလောက်လည်းရှုပ်ထွေးသည်။ သူသည်ဖြန်းရန်လိုသည်။
တကယ်တော့ငါတို့ကသေတ္တာဟာကိတ်မုန့်ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့အလှဆင်ထားတယ်လို့ထင်ပြီးသူကနောက်ကျောမှာ 'သင့်ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာဖုံးလုပ်' တယ်လို့တောင်ထင်ခဲ့တယ်။ အရသာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု! အဲဒါကငါတို့ဆီကလက်မတက်ပဲ။
Morris ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ကလေးငယ်မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်ဝတ်စုံတစ်ထည်ရှိပြီးရာနဲ့ချီတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာဖုံးအုပ်ထားတယ်။
မျက်နှာသေးသေးလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ သူကပဲ tbh အဲဒီမှာရှိနေရတာကိုပျော်တယ်။
ဝမ်းနည်းစရာမှာ Morris သည်အရသာစမ်းသပ်မှုတွင်မပါဝင်ခဲ့ပါ။ အနည်းငယ်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် FRUITY သည်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ချောကလက်အတုဟုသာဖော်ပြနိုင်သည့်အရာအဖြစ်သူခံစားခဲ့ရသည်။ Morris ကပြောတာကတော့သူကအိမ်အပြင်ကိုထွက်ရတာသိပ်ပျော်ခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရမှတ်: 2.5 / 5
ဟုတ်တယ်၊ ငါကအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပေဘူး။ ခူကောင်ကကြောက်စရာကောင်းတယ်။ ဘုရားသခင်အတွက်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်ုပ်ကင်မရာလိပ်စာထဲကနေဖျက်ပစ်ဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကအိပ်ရာအောက်ပိုင်းမှာအိပ်နေတဲ့အလယ်တ ၀ ှမ်းသွက်ချာပါဒဖြစ်နေတာကိုသင်တွေ့လိုက်ရတယ်။
သူဘာကြောင့်ရထားနဲ့တူတာလဲ သူ့ခေါင်းကဘာကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထက်နှစ်ဆကြီးတာလဲ။ အဘယ်ကြောင့် fuck ဆိုတဲ့သူကတောက်ပလိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သနည်း
ဖြန်းရန်လုံလောက်သောဖြန်းဆေးများနှင့်တစ်ပိုင်းတစ်စမျှသော်လည်းတစ်ရှုထောင့်အရသာရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခူကောင်ပုံရိပ်သည်မည်မျှစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်ကိုမကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒီကလေးထဲမှာ SHIT အချို့တွေ့ခဲ့ရပြီးသေတ္တာကိုငါတို့မကြည့်ခင်အထိပဲ။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အူတွင်းထဲကိုနေ့စဉ်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာလုံးဝဒဏ်ရာရသွားမှာပါ @Tesco, wtf ??
သင်သည်သင်၏ Colin ကိုကျူတာကိတ်မုန့်လုပ်လိုက်လျှင်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားဖူးပါသလား။ ဒါဟာချာလီလိုပဲ။
Curly သည်ကလပ်ရှိအရက်မူးနေသောဆိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အချည်းနှီးဖြစ်သောဖြစ်တည်မှုအကျပ်အတည်း၌စွဲကပ်နေပါကချာလီသည်သူ၏ fucked up သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။
သူကသူနမ်းရှိုက်နေသည့်ကိုကာကိုလာ၏နာမည်မှာရှင်းနေပါသည်။ သူမှာ coke ခေါင်းတွေကထွက်လာတဲ့ပုံကျတဲ့ဖရိုဖရဲစွမ်းအင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ အဲ့ဒီလှိုင်းထဲကလူတစ်ယောက်ကကိတ်မုန့်ကိုဒီလောက်များများစားပြီးအလှဆင်နိုင်တယ်။
Colin the Caterpillar ကိတ်မုန့်ခုနစ်သန်းကျော်ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှစ၍ ရောင်းချခဲ့ခြင်းမှာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Kylie နှုတ်ခမ်းနီလက်ဖြင့်သူမ၏လက်ကိုဆွဲကိုင်ခဲ့သူအမျိုးသမီးရေးရာမိဖုရား, Connie ဟာအကောင်းဆုံးအိမ်ပါတီပါတီမုန့်နှင့်အဆုံးစွန်ရက်နာကုသမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့သောပုံပြင်များကိုချိုးဖျက်လိုပါသလား? ယခု The Tab Leeds Join! Insta ရှိ DM @thetab_leeds သို့မဟုတ် Facebook ရှိ Tab Leeds မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါ။